Izilwane Zasekhaya – The Ulwazi Programme
Eminyakeni lapho isizwe sisagcina amasiko ngendlela eyiyo, besiba nobudlelwano obubalekile nemvelo kanye nokwembethe umhlaba kanye nezilwane ezinhlobonhlobo. Izilwane zasekhaya zidlale indima enkulu kusikompilo lwesintu. Impilo yazozonke izinsuku ukuba khona kwesilwane ekhaya bekuba wusizo olukhulu. Lokhu phela sikuthola uma sibuka indlela ebekuphilwa ngayo, ebekudingeka khona inyama noma uhlabile ubikela amathongo okuyiwo abheke umuzi ukuba ungachitheki kujabule izitha.
Ukufuya egcekeni kubalulekile ngoba yikho okwenza umuzi ufudumale ube nesithunzi kube kuhle egcekeni. Ukuyaluza kwezinkukhu namatshwele azo egcekeni, inkukhu iyingxenye yekhaya ngoba iqhude libika ukuqala kosuku nemisebenzi okumele yenziwe ngalolosuku.
Ukuba nesibaya egcekeni kulowo nalowomuzi kwenza umnumzane ofuyile kumnyama isibaya, lokhu kumnika isithunzi nenhlonipho kwamanye amadoda akhelene nawo. Noma ekhulisa amadodana akhe ewafundisa ukulusa ukuze nawo aqine abe amadoda angabhekana nezinselelo ezibanzi empilweni nokuba nekusasa eliqhakazile. Ekhaya amasi adliwa ubuthaphuthaphu indlala ayisondeli nokusondela. Umhlambi emzini wendoda wenza umahluko abantu bangaqhathanisi usizi balime ngazo futhi emasimini insimu ihlobise ikhaya kubemnandi kusuthwe.
Umuzi udinga ukugadwa ukuze izigangi nezilelesi zingadlaleli kuwo. Ukufuya izinja bekuba wusizo kakhulu ngoba phela nazo ziyingxenye yekhaya. Ziyalisingatha ziligade noma ufuna ukuzingela emahlathini yizo ezikusizayo ngokuthola umkhondo ziwulandele uthole leso silwane osizingelayo.
Izilwane zasekhaya ziyohlala zinathi ngoba nazo phela uMdali wazidalela ukuphila nabantu zibasize ngayoyonke indlela.
This article is about the pride bestowed by owning livestock. Cattle, goats, chickens, dogs are an important part of a homestead.